Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆီနာဘန်းမီးတောင် ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြောက်ဆူမားတြားပြည်နယ် ဆီနာဘန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် မှုတ်ထုတ်လိုက်သည့် မီးခိုးလိပ်များအား မတ်၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ဂျကာတာ၊ မတ် ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြောက်ဆူမားတြားပြည်နယ်ရှိ ဆီနာဘန်းမီးတောင်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယင်းမှ မှုတ်ထုတ်လိုက်သည့် ပြာမှုန့်များသည် (၅,၀၀၀)မီတာ အမြင့်ထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာနက ယင်းနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီနာဘန်းမီးတောင်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအထိ အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲမှု (၃)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနီးတစ်ဝိုက် မြို့နယ်(၃)ခု၊ ကျေးရွာ(၄၀)ရှိ ပြည်သူများ၏ နေထိုင်မှုနှင့် လယ်ယာထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကို သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Raditya Jat၏ ယင်းနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့်ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြောက်ဆူမားတြားပြည်နယ် ဆီနာဘန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် မှုတ်ထုတ်လိုက်သည့် မီးခိုးလိပ်များအား မတ်၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တိုက်ဖျက်ရေးဌာနက ဒေသခံ စစ်တပ်၊ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပူးတွဲ၍ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ထားပြီး ဘေးဒဏ်သင့်နေရာများ ကင်းလှည့်လျက်ရှိရာ ကပ်ဘေးကူညီရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသတိပေးချက်ကို ဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် အဆင့်(၃) သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ မီးတောင်ဝပတ်လည် (၃)ကီလိုမီတာမှ (၅)ကီလိုမီတာ ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများကို ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း Raditya Jat က ဆိုသည်။ ယခုမီးတောင်၏အခြေအနေသည် မတည်ငြိမ်သည့်ကာလဖြစ်ခြင်းကြောင့် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ပေါက်ကွဲနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြောက်ဆူမားတြားပြည်နယ် ဆီနာဘန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် မှုတ်ထုတ်လိုက်သည့်ပြာမှုန့်များဖုံးလွှမ်းနေသောလမ်းအား မတ် ၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆီနာဘန်းမီးတောင်သည် မြောက်ဆူမားတြားပြည်နယ် ကာရိုခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး နှစ်ပေါင်း(၄၀၀) နီးပါး တည်ငြိမ်မှုရှိနေရာမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် လူ(၁၆) ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း(၁,၀၀၀)ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလမှစ၍ ယင်းမီးတောင်သည် သတိပေးအဆင့် (၃)တွင် ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် ဆီနာဘန်းမီးတောင် ပြင်းထန်သည့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လူသေဆုံး ဒဏ်ရာရမှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် မီးတောင်အများဆုံး နိုင်ငံများအနက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံအတွင်း လှုပ်ရှားမှုရှိသည့် မီးတောင်ပေါင်း (၁၂၉)ခု ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
(210302) -- NORTH SUMATRA, March 2, 2021 (Xinhua) -- People watch volcanic materials being spewed from Mount Sinabung in Karo, North Sumatra, Indonesia, on March 2, 2021.
(210302) -- NORTH SUMATRA, March 2, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on March 2, 2021 shows people riding their motorbike onaroad covered with ash spewed by Mount Sinabung in Karo, North Sumatra, Indonesia.
Previous Article (နိုင်ငံတကာကပ်ရောဂါသတင်းစုစည်းချက်) အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံအများတွင် တစ်ရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါထပ်မံကူးစက်ခံရမှု စံချိန်သစ်ဖြစ်ပေါ်
Next Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဆီနာဘန်းမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီခိုးများ မီတာ ၁၅၀၀ အမြင့်အထိပန်းထွက်